PRODUCTS NEWS - Zhuji Feihu Textile Machinery Co., Ltd
Ị nọ ebe a : Home >ozi >News >PRODUCTS NEWS
A akpa igwe bụ a ngwaọrụ ji kee kpara akwa na a ọkara ma ọ bụ n'ụzọ zuru ezu akpaghị aka fashion.There nwere ọtụtụ ụdị nke ala na-akpa igwe, sitere na na mfe spool ma ọ bụ osisi ndebiri na-enweghị na-akpụ akpụ akụkụ ukwuu mgbagwoju mechanis ...
Yarn asọfe igwe ntụgharị ojiji
A asọfe igwe ma ọ bụ ntụgharị a igwe wrapping eriri, twine, cord, na eri, yarn, eriri, waya, rịbọn, teepu, etc. jidesie a spool, bobbin, ukwu, wdg ....
Yarn asọfe Machine Na Textile
Winders na-eji kpamkpam na akwa n'ichepụta, karịsịa na nkwadebe na ịkpa ákwà ebe yarn na-emerụ na na a bobbin na mgbe eji na a mgbagharị. Ball winders ndị ọzọ ụdị ntụgharị na ifufe na yarn si skein ụdị n'ime b ...
Open-End ịtụ Textile Machine
Ọ na-amara dị ka ezumike spinning ma ọ bụ rotor spinning. Ụkpụrụ n'azụ na-emeghe-ọgwụgwụ spinning bụ nke yiri nke a uwe draya spinning jupụtara Ibé akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị nwere ike imeghe ụzọ na dọpụtaara a mpempe akwụkwọ, ọ ga-akpa ogho ọnụ dị ka ị na-Pu ...
Olee mbukota tupu mbupu
General igwe bụ na agụụ mbukota. Akpan akpan igwe na-mbukota na agụụ na osisi ikpe. Akpa ibu dị ka kwa igwe size.step otu: ekpocha igwe na-etinye ụfọdụ oilStep otu :contect nchara ...